यसरी पो नाफामा गएको रहेछ नेपाल टेलिकम, खुल्यो भित्री रहस्य ! | suryakhabar.com
Home आर्थिक यसरी पो नाफामा गएको रहेछ नेपाल टेलिकम, खुल्यो भित्री रहस्य !
यसरी पो नाफामा गएको रहेछ नेपाल टेलिकम, खुल्यो भित्री रहस्य !
on: ११ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०७:२९ In: आर्थिकTags: No Comments
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले उपभोक्ताबाट ‘अवैध’ रूपमा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम नाफाका नाममा असुल गर्दै आएको छ । सामान्यतया लागत मूल्यमा २० प्रतिशत जोडेर मुनाफा लिन पाउने व्यवस्था छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने लागत मूल्यमा एक सय पाँच प्रतिशत नाफा जोडेर उपभोक्ताबाट असुल गर्दै आएको तथ्य भेटिएको छ ।
लागत मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जोडेर नाफा लिन नपाउने व्यवस्था कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा छ। बुधबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखिएको छ, सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले वर्षौदेखि उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्दै ६० प्रतिशतदेखि एक सय पाँच प्रतिशतसम्म नाफा असुलेको पाइएको छ।
नेपाल टेलिकमले वार्षिकोत्सवका बेला सार्वजनिक गरेको ६ आर्थिक वर्षको बासलात केलाउने हो भने उक्त कम्पनीले उपभोक्तासँग ठगी गरी अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरेको प्रस्ट हुन्छ । टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा एक सय पाँच प्रतिशत, ०६८/६९ मा ७३ प्रतिशत, ०६९/७० र ०७०/७१ मा ६४/६४ प्रतिशत, ०७१/७२ मा ८८ प्रतिशत र ०७२/७३ मा ६५ प्रतिशत नाफा उपभोक्ताबाट असुल गरेको छ।
प्रधानसेनापतिले दिए सेनालाई सतर्क रहन निर्देशन
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य ५०० ले बढ्यो
१३ माघ २०७६, सोमबार १७:०२
११ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०७:२९